Sidee baan u gelin karaa AQOONSIGEYGA anigoo isticmaalaya kumbuyuutarka? – Transfer Galaxy
Sidee baan u gelin karaa AQOONSIGEYGA anigoo isticmaalaya kumbuyuutarka?
Xaqiijinta AQOONSIGA iyada oo la isticmaalaya kombiyuutarka
Isticmaal habkan haddii aad ku kaydisay sawirada dokumentiyadaada AQOONSIGA kombuyuutarkaaga. HubI inaadan isticmaalin qaabab fayl ah iyo sawiro oo aan la taageerin.
1. Gal barta adigoo isticmaalaya emailka iyo ereyga sirta aad ku diiwaangashay.
2. Diyaarso dukumeentigaaga AQOONSIGA oo riix 'Varify'.
3. Dooro khiyaarka ugugu haboon dukumeentigaaga AQOONSIGA: baasaboorka, liisanka darawalnimada ama kaarka AQOONSIGA.
4. Dooro khiyaarka 'Upload a saved photo from your computer'.
5. Nidaamka ayaa si toos ah u falanqeyn doona sawirkaaga. Haddii uu soo celiyo digniin, riix batonka 'Take again' oo dooro sawir kale.
6. Haddii aysan jirin wax digniin ah, riix 'Confirm'.
7. Haddii aad isticmaaleyso liisanka darawalnimada ama kaarka AQOONSIGA, raac isla tilmaamahaa loo geli sawir cad ah ee dhinaca dambe ee dukumintiga.
8. Hab-socodka xaqiijinta ayaa bilaaban doona, waxaana laguu wareejin doonaa bog internet ku meel gaar ah.
9. Marka aqoonsigaaga la xaqiijiyo, waxaad heli doontaa ogeysiis qoraal ah. Xaqiijinta waxay caadi ahaan qaadataa 5-15 daqiiqadood iyada oo ay ku xiran tahay meesha aad joogto.
Xaqiijinta aqoonsiga iyada oo loo marayo kombiyuutar iyadoo la isticmaalaya qalab taleefanka gacanta si sawiro loogu qaado
Isticmaal doorashadan haddii aadan haysan wax sawiro ah ee dukumiintigaaga AQOONSIGA oo ku keydsan kombuyuutarkaaga laakiin aad heysato qalab taleefanka gacanta ah oo aad isticmaali karto si aad sawiro ku qaado.
2.Diyaarso dukumeentigaaga AQOONSIGA oo riix 'Verify'.
3.Dooro khiyaarka ugugu haboon dukumeentigaaga AQOONSIGA: baasaboorka, liisanka darawalnimada ama kaarka AQOONSIGA.
4. Dooro khiyaarka 'Need to use your mobile to take photos?'
5. Geli / Qor wadankaaga iyo lambarka taleefankaaga gacanta ee aad sheegtay markii aad isdiiwaangalisay. Riix 'Send link' oo ku daa browser-ka in uu furnaado.
6. Fur fariinta qoraalka ee qalabkaaaga taleefanka gacanta oo riix linkiga laguu soo diray . Linkiga / xiriirka wuxuu kuu gudbin doonaa bar internetka ah oo kaa codsanaya inaad galiso sawiradaada. Riix batonka kaamarada.
7. Sawir ka qaadO dukumeentigaaga AQOONSIGA boggan internetka oo riix 'Confirm'. Riix 'Use photo'.
8. Nidaamka ayaa si toos ah u falanqeyn doona sawirkaaga. Haddii uu soo celiyo digniin, riix batonka 'Take again' oo qaad sawir cusub.
9. Haddii aysan jirin wax digniin ah, riix 'Confirm'.
10. Haddii aad isticmaaleyso liisanka darawalnimada ama kaarka AQOONSIGA, raac isla tilmaamahaa loo geli sawir cad ah ee dhinaca dambe ee dukumintiga.
11. Ku noqo kumbuyuutarkaaga oo ka riix batonka 'Submit document' browser-kaaga.
12. Hab-socodka xaqiijinta ayaa bilaaban doona, waxaana laguu wareejin doonaa bog internet ku meel gaar ah.
13. Marka aqoonsigaaga la xaqiijiyo, waxaad heli doontaa ogeysiis qoraal ah. Xaqiijinta waxay caadi ahaan qaadataa 5-15 daqiiqadood iyada oo ay ku xiran tahay meesha aad joogto.